Hove Collagen Peptide Fekitori - China Hove Collagen Peptide Vagadziri, Vatengesi
Cod Hove collagen Peptide imhando I collagen peptide.Inotorwa kubva ku cod hove ganda, inogadziriswa ne enzymatic hydrolysis pakadzika tembiricha, Inoshandiswa zvakanyanya mukudya, hutano, mishonga uye ma cosmetics maindasitiri.
Marine hove oligopeptide chigadzirwa chakadzika chakagadziriswa chegungwa rakadzika hove collagen, ine zvimiro zvakasarudzika mukudya uye kushanda. Mazhinji acho madiki mamorekuru akasanganiswa peptide ine makumi maviri nematanhatu amino acids ane mamorekuru uremu hwe500-1000dalton. Inogona kunyudzwa yakanangana nematumbu madiki, ganda remunhu, nezvimwewo Ine hwakasimba hutano hunhu uye yakafara kushandiswa.
Hainan Huayan Collagen Technology Co, Ltd inogadzira zviuru zvina zvematani ehove yepamusoro collagen peptide gore rega rega, iyo hove collagen (peptide) inyowani enzymatic hydrolysis maitiro yakatanga kugadzirwa nekambani yeHuayan, iyo inoshandisa iyo isina kusvibiswa-isina zvinhu zvezviyero nemakanda. . Inofananidzwa neyechinyakare acid-base hydrolysis ye collagen, iyo enzymatic hydrolysis maitiro ekambani yedu ine zvakawanda zvakanaka: Chekutanga, nekuti enzymatic hydrolysis mamiriro anowanzo nyoro, hakuzove nekusiyana kwema molecule chimiro uye hapana deactivation yezvinhu zvinoshanda. Kechipiri, iyo enzyme ine yakagadziriswa cleavage saiti, saka inogona kudzora mamorekuru uremu hwehydrolyzed collagen uye kuwana hydrolysates ine yakakwenenzverwa mamorekuru kurema kugovera. Chechitatu, nekuti asidhi uye alkali hazvishandiswe mune enzymatic hydrolysis maitiro, iyo enzymatic hydrolysis maitiro inoenderana nharaunda uye haina kusvibisa nharaunda.